ဦးနှောက်ကို Upgrade လုပ်ကြမယ် !!! -
အသက်အရွယ်ကြီး လာတာနဲ့ အမျှ လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာတတ်ပါတယ်
မေ့တတ်တာမျိုး၊ တခုခုဆို မမှတ်နိုင်တော့တာမျိုး၊ စွဲနေအောင် မှတ်ထားပြီးမှ စဉ်းစားလို့မရတော့တာမျိုး ကြုံဖူးကြတယ်မလား?
ကိုယ့ရွဲ့ Brain Functionတှကေို Boost လုပဖွို့
1)Stress (စိတ်ဖိစီးမှု) ကို လျော့ချပါ
စိတ်ဖိစီးမှုတွေက ဦးနှောက်ရဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး ရန်သူပါပဲ။ အချိန်အကြာကြီး စိတ်ဖိစီးနေတာက ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုလျော့စေတဲ့ အလေ့အကျင့်ကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ (ဥပမာ – တရားထိုင်တာမျိုး ၊ စိတ်ခံစားချက်တွေကို သိမ်းမထားပဲ ရင်ဖွင့်ဆွေးနွေးတာမျိုး)
ည11 မတိုင်ခင် အိပ်တာ သင့်ဦးနှောက်ကို အထောက်အကူပြုပါတယ်နော်။ အချိန်မှန်မှန်အိပ်ပါ။ တနေ့ကို 8နာရီပြည့်အောင် အိပ်သင့်ပါတယ်။ညဖက်မအိပ်လို့ နေလည့်မှ အချိန်ဖြည့်ပြန်အိပ်တာမျိုးက အကျိူးမရှိပါဘူးနော်။အိပ်ခါနီး 1နာရီအလိုမှာလဲ ဖုန်းသုံးတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ကော်ဖီ လဖက်ရည်တွေကို အိပ်ခါနီးမသောက်ပါနဲ့နော်။
စဉ်းစားတွေးတောနေခြင်းက ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနေသလိုပါပဲနော်။ အသစ်အဆန်းတခုခုကို လေ့လာတာမျိုး၊ ကိုယ့်အရည်အသွေးမြင့်အောင် တွေးတောကြံဆနေတာမျိုးလုပ်ပေးပါ။ Game ဆော့ရင်တောင် Puzzles တို့Chess တို့စတဲ့ games လေးတွေဆော့ပေးပါ။
4)Brain ကို Boost လုပ်တဲ့ အစားအသောက်တွေစားပေးပါ
Omega3ကြွယ်ဝတဲ့ အစားစာတွေစားပေးပါ။Omega 3ကို Seafood တွေ ငါးတွေ (ဆယ်မွန်၊ တူနာ၊ ဆာဒင်းငါး)တွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ငါးမကြိုက်ရင် ငါးကြီးဆီ capsule တွေသောက်လို့ရပါတယ်နော်။ အစိမ်းရောင် အသီးအရွက် တွေများများစားပါ။Vegetables မှာပါတဲ့Antioxidants တွေကို ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ ပျက်စီးတာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ Red Wineသောက်ပေးပါ။ Wine ကသွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေတဲ့အတွက် သင့်ဦးနှောက်သွေးများများရောက်စေခြင်းက Brain functions ကိုကောင်းစေပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာ Gym သွားဆော့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ တနေ့ကို နာရီဝက်လောက်နဲ့ တပတ်မှာ ငါးရက်လောက် လမ်းလျှောက်ပေးတာလဲ
ကောင်းမွန်တဲ့ exercise ပါပဲ။ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းတာအမှန်ပဲမို့ Brain function ကောင်းချင်ရင် exercise လုပ်ကြပါနော်။
သိရင် Comment Box မှာ ပြောပြပေးပါအုံးနော်။
Sep 14, 2021 Health Tips, Mental Health